नेपालमा वैकल्पिक शक्ति असफल भएकै हो त ? – Nagarik Network
नेपालमा वैकल्पिक शक्ति असफल भएकै हो त ?
अघिल्लो वर्षको चुनावमा प्रदेशमा केही सिटमा चित्त बुझाउन परेपनी विवेकशील साझा पार्टीलाई एउटा ठुलो सम्भावना बोकेको पार्टीको रूपमा हेरिएको थियो । तर गठन भएको डेढ वर्ष नपुग्दै दुई टुक्रामा विभाजित हुँदा यसले नेपालको बैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनमा ठुलो धक्का लागेको धेरैको विश्लेषण छ ।
अरु कतिको बुझाइमा सामाजिक आन्दोलनको जगमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा उदाएको यस पार्टीको फुटले ठुला दलहरुलाई मनोबैज्ञानिक बल पुगेको छ । फुट सगै नेपालमा सोघोषित बैकल्पि शक्तिको भविस्य माथि बहस चुलिएको छ । भर्खरै बनेको त्यसमा पनि सानो पार्टी मिलाउन नसक्नेहरुले कसरी देशलाई नेतृत्व दिन सक्लान् भनेर धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
हामी ठुला पार्टी जस्तो होइनौं भन्ने तर गराइमा पुराना पार्टी भन्दा खासै भिन्नता देखाउन नसक्दा शुबचिन्तकहरुलाई निराश बनाएको छ। यस अघि बैकल्पिक भनिएको नयाँ शक्ति पार्टीले यस्तै फुटको शिकार हुन पुगेको थियोे । पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टीका धेरै नेताकार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गरेपछि भट्टराई एक्ला जस्तै भएका छन् ।
लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापनको भविष्य के?
समग्रमा १३औं साग कस्तो रह्यो?
राजनीति व्यवसाय बनेकै हो त?
किन हुँदैछ गुठि विधेयकको विरोध?
डा. बाबुराम भट्टराई : छोरी नजन्मदै ‘डर्टस अफ कार्ल मार्क्स’ उपहार दिने बाबु
निर्मलाका लागि न्याय माग्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन, गृहमन्त्रीकाे राजिनामा माग
गिरिजा देखि रामवरणको सेवा गरें, नेताहरु इमान्दार पाइनः हरि शर्मा
असहायमाथि याे कस्तो व्यवहार!
सन्दर्भः संविधान दिवस तानाशाही प्रवृत्ति ‘रुल बाइ म्यान’ हावी हुँदैछः अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल
संविधान लुगा फेरे जस्तो नफेरौं: पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी
‘ग्यास्ट्रिकले झुक्याउला, डिम्बाशयको क्यान्सर पनि हुनसक्छ’